PUBG Mobile - Androidsis Androidsis
Android ဂိမ်းကဏ္segmentတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ PUBG Mobile ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာသည်ဤဂိမ်းကို၎င်းတို့၏ဖုန်းသို့ကူးယူပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအကောင်းဆုံးဂိမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဤလူကြိုက်များဂိမ်းအကြောင်းကိုအရာအားလုံးသိလိုလျှင်, ဤအမျိုးအစားသည်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
ဤကဏ္တွင် PUBG Mobile အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ သတင်းနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများအပြင်လူကြိုက်များသည့်ခေါင်းစဉ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုဖြင့်တိုးတက်စေရန်လှည့်ကွက်များနှင့်သင်ခန်းစာများ။ သင်ဤဂိမ်းကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ဤအမျိုးအစားကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
PUBG Mobile သည် Royale Pass 17 ကိုအဆုံးသတ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ၎င်းအနေဖြင့်၎င်းတို့အနေဖြင့် ...
PUBG Mobile သည် Call of Duty Mobile နှင့် Garena Free Fire တို့နှင့်အတူ၊
PUBG မိုဘိုင်းရာသီ ၁၆ သည်အဆုံးသတ်တော့မည်။ ရက်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သော်လည်းမဖြစ်မီ…
Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်သောကူးစက်ရောဂါသည်နည်းပညာကုမ္ပဏီအများစုအတွက် ၀ င်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
PUBG Mobile တွင်မြန်နှုန်းနှင့်သွက်လက်သောစွမ်းရည်သည်ရန်သူများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ရန်ရှင်သန်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အတွင်း…
အကယ်၍ သင်သည် PUBG Mobile မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားသူဖြစ်ပါက Tencent မှထွက်ပေါ်လာသည့်နောက်ဆုံးပေါ် update နှင့်အတူ ...
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက PUBG Mobile သည် ... အတွင်းရှိအကျိုးအမြတ်အရှိဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Tencent သည်နောက်ဆုံး၌ PUBG Mobile update 1.1 အတွက် patch note များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလတွင်အိန္ဒိယအစိုးရသည်တရုတ်နိုင်ငံမှအက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်း ၁၁၇ ခုခန့်ကို အသုံးပြု၍ ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
PUBG Mobile တွင်ကျားခုန်ရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်ရှင်းပြပြီးအနည်းငယ်မျှသာသိထားသည့်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းပညာဖြစ်သည်။